Home Wararka Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey oo loo diiday in uu tago Baraawe
[Daawo] Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey oo loo diiday in uu tago Baraawe
Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa loo diiday in uu ka dhoofo Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde, isaga oo kusii jeeday degmada Baraawe.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Maamulka Koonfur Galbeed uu diiday in Cabduweli Muudeey uu tago Baraawe maadaama uu watay Ciidamo farabadan.
Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa markale u sharaxan kursiga HOP#145 ee Golaha Shacabka, waxaana la sheegay in taratanka doorashada laga reebay.
la-taliyaha dhanka Amniga Qaranka ee Madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegay in uu ka dambeeyo qorshaha lagu diiday in Cabduweli Muudeey uu tago Baraawe maadaama uu doonayo guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka.
Previous articleAU conclude discussion with Somalia over new military mission
Next articleKenya oo ka dalbatay Deni in uu dalkeeda ka baxo
Wararkii ugu dambeeyay Qarax ka dhacay Boosaaso